Fariid "Gurxan Waa Xirfadle Heer Sare".
Friday, June 22nd, 2018 - 15:52:27
Tuesday February 21, 2017 - 11:56:05 in Wararka by Kubad Bile
Laacibka qaranka dalkeena Soomaliya ahna hogaamiyaha kooxda booliska Soomaliyeed ee Heegan Jabriil Xasan Fariid ayaa aad ugu hadalay laacibka naadiga Waxool C/Nasir Cumar Maxamed Cumar (Gurxan).
Kabtan Jabriil Xasan ayaa dib ugu soo Laabtay kooxda Heegan,ka dib markii uu kaarka casaanka qaatay kulankii furitaanka Horyaalka Soomaliya 2016-2017,xili uu qalad ku galay daafac kooxda Elman Nuur Ibraahim Cali wuxuuna qaladkaas sababay in kabtanka Heegan uu kooxdiisa seegay saddexadii kulan uu horeesay xili ciyaareedkan.
Jabriil Xasan Fariid ayaa bartiisa facebook kusoo daabacay katanka naadiga Waxool gurxan gool uu ka dhaliyay kooxda Mqudisho United ciyaar dhexmartay kooxaha M.United iyo Waxool 29-11-2016,xili uu kulankaas uu ku dhamaaday 4-1 oo ay guusha raacday wiilasha Waxool.
Kabtanka naadiga Waxool Cabdi Nasir Cumar Maxamed (Gurxan) ayaa bishii November sanadkii tagay 2016 waxa uu ku guleystay goolka bishaas, ka dib markii uu si xirfadaysan kubbadd heer sare ka dhaliyay shabaq ilaaliyaha naadiga Muqdisho Uinted C/Raxman Mahad ciise maaney.
"Guraxan waa ciyaaryahan xirfad wanaagsan ku leh dalka gaar ahaan kooxda kubbadda cagta Waxool waxa aad arki kartaa qaabka wacan uu goolasha u dhaliyo runtii waxa aan lee yahay halkaada kasii wad da’daalka xoogan iyo tababarada joogta aad ugu jirto in heer wacan ka gaartid kubbadda cagta waxa aan kuu rajaynaa horomar wacan iyo in aad ku guleysto koobaba badan kabtan Jabra ayaa sidaas u sheegay Qalinle sports”.
Si kastaba kooxaha kubbada cagta Waxool iyo Heegan ayaa ciyaar xiiso badan oo ka tirsan Horyaalka Soomaliya 2016-2017 kuleh Gegida Banaadir Stadium ee degmada Cabdi Casiis.